ဆိုနီ Bravia အမှားအယွင်းများနှင့်ဘက်လိုက်မှုမီးများသည်ကျပန်းထင်မြင်ချက်အတိုင်းမီးဖွင့်နေသည် - MediaLight Bias Lighting
Sony Bravia bug နှင့်ဘက်လိုက်မီးအိမ်များသည်တီဗွီပိတ်ထားသည့်အခါကျပန်းထင်ရလောက်သည့်အဖွင့်အပိတ်ဖြစ်သည်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ဘက်လိုက်မှုမီးတွေက Sony Bravia ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆက်ဖွင့်နေလို့ပါ။
သတင်းဆိုးမှာတီဗွီတွင်မပြသသေးသောပြissueနာရှိနေသည် ဖြစ်နိုင် (GitHub သို့ link) ကို Sony မှဖြေရှင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
11/14/2020 Update ကို!
Bravia Standby Bug ကြောင့် Bravia ဖွင့်တိုင်းပိတ်ချိန်တွင်သူ၏အသံချဲ့စက်ကိုကလစ်နှိပ်စေသည့်ပြproblemsနာများကြုံတွေ့နေရသောထူးကဲသောဖောက်သည်တစ် ဦး ဖြစ်သော Josh J. အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အွန်လိုင်းဖိုရမ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကသူ့ကိုအမှားအယွင်းများအလင်းရောင်အတွက် Bravia Standby Bug တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့်ပြင်ဆင်ချက်ကိုဖြစ်စေခဲ့သည်။ အမှားအယွင်းကိုနားလည်ရန်နှင့်ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်မည့်အရာများကိုသိရှိရန်ဤစာတိုကိုဖတ်ပါ။
သင်၏ Media Bight ကိုသင်၏ Sony Bravia ပေါ်ရှိ USB port မှ Power သောအခါ TV တီဗွီကိုပိတ်လိုက်သောအခါမီးများသည်ကျပန်းဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းကြောင့်ဤစာမျက်နှာကိုသင်တွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်။ စိတ်ပျက်စရာပါ
အမှတ်အခြားအမှတ်တံဆိပ်မီးများသူတို့ပိတ်ထားသည့်အခါသို့မဟုတ်ပါဝါဆုံးရှုံးသောအခါမှသာပိတ်ထားသည်။ ဒါသင်မျှော်လင့်ထားတာပါ။ အကယ်၍ သင်မီးခွက်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါကပိတ်သွားပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကို Plug ပြုလုပ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပါ။ မီးခွက်ကဘာမှမလုပ်ဘူး ပါဝါကိုပြန်လည်တည်ဆောက်သောအခါ၎င်းသည်မီးထွန်းလိုက်သည်။
Sony Bravia တီဗီတိုင်းကဒါကိုလုပ်သည်။
ဒါကြောင့် MediaLight Mk2 Flex တိုင်းနဲ့အဝေးထိန်းခလုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ MediaLight ကို Logitech Harmony ဂေဟစနစ်အပါအ ၀ င်စမတ်အချက်အချာနေရာများနှင့်ဝေးလံသောနေရာများသို့ပရိုဂရမ်ပြီးသားဖြစ်သည်။
၁) ပြင်ပပါဝါကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အဝေးထိန်းကိုသင်၏စမတ်အဝေးထိန်း (သို့) အချက်အချာထဲသို့ထည့်ပါ။
၂) သင်၏ MediaLight ကိုတီဗီမှအားသွင်းပါ၊ RS2C control mode ကို“ serial” သို့ပြောင်း။ MediaLight အဝေးထိန်း (သို့) smart hub (သို့) universal remote ဖြင့်မီးများကိုပိတ်ပါ။.
သင်၏ RS232C port mode ကို serial ပြောင်းရန်ညွှန်ကြားချက်များဒီမှာ။ ပြီးတာနဲ့တီဗီအလိုအလျောက်ပြန်လည်စတင်လိမ့်မည်။
မြင်နိုင်သောအက်ပ်များအားလုံးဖြင့်ဂူဂဲလ်မီနူးသို့သွားပါ။ သင်၏ Bravia ဝေးလံခေါင်ဖျားရှိ "Home" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ပုံမှန်သွားနိုင်သည်။ မျက်နှာပြင်၏ညာဘက်အပေါ်ဘက်ရှိ "ချိန်ညှိချက်များ" ရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါ (ဤ Android menu သည်နောင်လာမည့် Android TV အသစ်ပြောင်းခြင်းနှင့်အတူပြောင်းလဲနိုင်သည်)
ချိန်ညှိချက်များ၏ "ကွန်ယက်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ" ကဏ္ down ကိုအောက်သို့ဆင်းပြီး "RS232C control" ဟုခေါ်သည့်အကြောင်းအရာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ရွေးပါ။
RS232C ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် "Via serial port" ကိုရွေးပါ။
သင်ရွေးချယ်ပြီးနောက်သင်၏တီဗီပြန်လည်စတင်လိမ့်မည်။ သင်ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်တီဗီပိတ်ထားချိန်တွင်မီးများသည်ဆက်လက်ဖွင့်နေလိမ့်မည်။ သင်၏ MediaLight Bias Lighting System တွင်ထည့်သွင်းထားသော smart hub, universal remote သို့မဟုတ် remote control ဖြင့်မီးများကိုဖွင့ ်၍ ပိတ်နိုင်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ Android TV များသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင် firmware ဒေါင်းလုပ်များနှင့်ပြန်လည် reboot လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည်ရှားပါးသောအချိန်များတွင်မီးများပိတ်နိုင်သေးသော်လည်း၎င်းတို့သည်မပြတ်မလပ်မဖွင့်ဘဲမဖွင့်ဘဲ, အလွန်အမင်းမေ့နေပြီးဝေးလံခေါင်သီသော command များကိုအမြဲတမ်းတုန့်ပြန်လိမ့်မည်။
ဆိုလိုတာကသင်ဟာအဝေးထိန်းတစ်ခုပါ ၀ င်တဲ့ဘက်လိုက်မှုဆိုင်ရာအလင်းရောင်ကိုပိုင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်အခု Bravia standby bug ကိုအဖြေရှာဖို့ရောက်လာပြီ။ 👍